Jubbaland oo soo saartay Liiska Musharaxiinta Aqalka sare ee Baarlamaanka – STAR FM SOMALIA
Maamulka Jubbaland ayaa noqday maamulkii 3aad ee soo saara liiska Musharaxiinta u matalaya Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya.
Liiskan oo ay ka dhex muuqdaan Siyaasiyiin dhowr ah ayaa waxaa xubin walba oo beesha ah u tartamaya kursiga Xildhibaanka Aqalka sare hal illaa saddex musharax.
Madaxweyne kuxigeenkii hore ee Jubbaland C/llaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa ka mid ah xubnaha Musharaxiinta Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka.
Sidoo kale waxaa ka soo muuqday Liiska Musharaxiinta Aqalka sare C/fataax Maxamed Cali oo ka mid ahaa Ururkii Xisbul Islaam.
Hadaba halkan hoose ka akhriso liiska Musharaxiinta Aqalka sare u matalaya Jubbaland Baarlamaanka Federaalka:-